५९ करोडका मालिक सुशान्त राजपुतको नाममा अन्तरिक्षमा जग्गा,मूल्य सुनेरै उड्नेछ सबको होस….पुरा पढ्नुहोस . – Khabar PatrikaNp
५९ करोडका मालिक सुशान्त राजपुतको नाममा अन्तरिक्षमा जग्गा,मूल्य सुनेरै उड्नेछ सबको होस….पुरा पढ्नुहोस .
July 31, 2020 495
एजेन्सी । बाहिरबाट चमकदमक देखिने बलिउड स्टारहरूको जीवनलाई भित्रभित्रै निराशा, एक्लोपन र भयले गाँजेको हुन्छ भन्ने विगतका थुप्रै उदाहरणले देखाउँछन्। कोही करिअरले गति समात्न नसकेको चिन्तामा डुब्छन्। कोही उचाइमा पुगेको करिअर धर्मराउन थालेपछि असन्तुलित हुन्छन्।
कोही भने ‘रियल’ र ‘रिल’ जीवनबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेर लर्खराउन थाल्छन्। हुन त यस्तै असहज स्थिति अरू क्षेत्रमा पनि भोग्नु नपर्ने होइन। तर, अरू क्षेत्रमा मान्छेलाई आफ्नो हिसाबले स्वाभाविक भएर बाँच्ने छुट हुन्छ। बलिउडकर्मीहरूले त्यो छुट पाउँदैनन्।
संसारको आँखा आफूतिर सोझिएका बेला मन जतिसुकै डढे पनि अनुहार तेजिलो पार्नैपर्छ। जिन्दगी जतिसुकै अँध्यारो भए पनि सिनेमाको चम्किलो लाइटमुनि उभिँदा संसारले देख्ने बाहिरी आवरण उज्यालो बनाउनैपर्छ। भित्र र बाहिरको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा राख्नु सबैको वशको कुरा होइन। सुशान्तको मृत्युपछि धेरै अभिनेताले बलिउडको यही कटु यथार्थ जाहेर गरेका छन्।
हालै मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै निवासमा देहत्याग गरेका अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको थुप्रै मंहगा कार र मोटर साइकल लगायत चन्द्रमामा पनि आफ्नै जग्गा रहेको खुलेको छ । ५९ करोड भारु बराबरको सम्पत्तिका मालिक अन्तरिक्ष प्रेमी थिए । उनी अधिकांश समय सूर्य ,चन्द्रमामा, नक्षत्र ग्रह जस्ता ब्रम्हान्डिय वस्तुहरुबारे कुरा गरिरहन्थे । घन्टौ आकास नियाल्ने बानी भएका उनीसंग निकै महंगो टेलिस्कोप पनि छ । शनि ग्रहको चक्का हेर्न उनले त्यो निकै महंगो टेलिस्कोप किनेका थिए ।
भगवान शिवजीका अनन्य भक्त उनी प्रायश ओमको ब्रम्हान्डिय महत्वबारे सामाजिक संजालमा सामग्रीहरु पोस्ट गरिरहन्थे । मोटर साइकल भनेपछि हुरुक्कै हुने उनीसंग स्टाइलिस बिएमडब्ल्यु के १३०० आर मोटरसाइकल लक्जरी स्पोर्टस कार मासेरटी क्वात्रोपोर्ते र ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर सभ पनि छ । चन्द्रमामा आफ्नो जग्गा हुने एक मात्र अर्को वलिवुड कलाकार शाहरुख खान हुन् उनलाई एकजना फ्यानले सो जग्गा किनिदिएका थिए ।
Prevबास्तुअनुसार शुक्रबार जन्मने मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ? जान्नुहोस
Nextजिन्दगी भरि नै धन कमाउन चाहनु हुन्छ ,भने यि ९ उपाय अपनाउनुहोस
भोलि कार्तिक २३ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33586)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25129)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22496)
अछाममा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला !
मनोकामना माइको दर्शन गर्दै माघ ०५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस
एकाबिहानै श्री हलेसी महादेव को दर्शन गरी भेटी स्वरूप शेयर गर्दै पढ्नुहोस्,माघ ०५ गते सोमबारको राशिफल